शीर्ष १० वेब व्यवस्थापन को गल्तीहरू
वेब व्यवस्थापन भनेको के हो?
वेब प्रबन्धन विभिन्न प्रक्रियाहरू, जस्तै डिजाइन, कोडिंग, नयाँ छविहरू पोस्ट गर्ने, सामग्री अपडेट गर्ने, आदि जस्ता वेबसाइटहरूको वेबसाइटहरूको आवश्यक गतिविधिहरूको सेट हो।
Semalt बाट विज्ञहरू भन्छन् कि वेब व्यवस्थापन गल्तीहरूका बारे सचेत हुनुको मतलब तपाईको साइट यी गल्तीहरूको शिकार हो कि होइन भनेर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, यहाँ वर्णन गरिएको सबैभन्दा साधारण वेब व्यवस्थापन गल्तीहरू छन्
वेब व्यवस्थापन गल्तीहरू रोक्न उत्तम तरिका भनेको एक विश्वसनीय र स्थापितको मद्दत लिनु हो
Semalt एक डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सी हो जसले अनलाइन संसारमा व्यापार सफल बनाउनको लागि आवश्यक हरेक सेवा प्रदान गर्दछ। धेरै कारणहरूले सुझाव दिन्छ कि Semalt वेब प्रबन्धन कार्यहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो। तिनीहरू मध्ये केही हुन्:
तपाईंको व्यवसायलाई अनलाइन लिने वा यसका लागि राम्रो अनुकूलित वेबसाइट निर्माण गर्नु त्यति ठूलो कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा यो सुनिश्चित गर्नु हो कि साइटले यसको प्रभावकारिता गुमाउँदैन। र, यो तब मात्र सम्भव छ जब साइट मद्दतको लागि जाँच गरीन्छ र वेब व्यवस्थापनको गल्तीहरूको लागि सुधार गरिन्छ। यदि तपाई सफल हुन चाहानुहुन्छ र तपाईको प्रतिस्पर्धी भन्दा सँधै अगाडि रहनुहुन्छ भने तपाईले पेशेवर वेबसाइट प्रबन्धन सेवाहरूको रोज्न सक्नुहुन्छ।
400 मिलियन भन्दा कम यस वेब दुनिया मा सक्रिय वेबसाइटहरु। जे होस्, ती सबैले आगन्तुकहरू, वेबसाइट मालिकहरू, वा दुबैको उद्देश्यहरू पूरा गर्दैनन्। र किन यो हुन्छ?
केहि वेबमास्टरहरू भन्छन् कि वेबसाइटको अनुचित डिजाइन कारण हो, कोहीले गलत कोडि the कारण हो भन्ने विश्वास गर्छन्, र केहि अन्य कारणहरू दिन्छन्। यदि तपाईं ती सबैलाई मिलाउनुहुन्छ, तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ कि यो वेब व्यवस्थापनको गल्तिहरूको कारण हुन्छ।
आज, तपाइँ साधारण वेब व्यवस्थापन गल्तीहरूको बारेमा जान्न लाग्नुहुन्छ, तर त्यो भन्दा पहिले, वेब व्यवस्थापनलाई बुझौं।
बिश्व ब्यापी सन्जल। केही वेबसाइट मालिकहरू आफ्नो वेबसाइटलाई व्यक्तिगत रूपमा विकास र प्रबन्ध गर्न पर्याप्त कुशल छन्, जबकि अन्यले यो कामको लागि पेशेवरहरू राख्छन्।
यो किनभने पेशेवरहरु द्वारा प्रदान गरिएको प्राविधिक विशेषज्ञताले वेबसाइटको प्रत्येक तत्वमा पूर्णता ल्याउँछ। वेब व्यवस्थापन उत्तम तरिकाले सेवा प्रदायक र ग्राहक बीचको बन्धनलाई सुदृढ गर्दछ।
१० साझा वेब व्यवस्थापन गल्तीहरू Semalt द्वारा व्याख्या गरिएको
Semalt। व्यावसायिक वेब रखरखाव सेवा प्रदायकहरूले निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको साइट सधैं तपाईंको उद्देश्य अनुसार कार्य गर्दछ। तिनीहरूले एक व्यवसाय को लागी प्रभावशाली योगदान गर्छन्।
वेबसाइट मालिकहरूको ठूलो संख्यामा तिनीहरूको वेबसाइटमा काम गर्न बहु एजेन्सीहरू सामेल छन्। यो कुनै पनि सराहनीय अभ्यास होइन किनभने यस्तो संलग्नताले नराम्रो प्रयोगकर्ता अनुभव र तपाईंको वेबसाइटमा धेरै गडबड निम्त्याउन सक्छ।
बहु डिजाइनरहरू वा वेबमास्टरहरू वा वेब प्रबन्धन कम्पनीहरूको संलग्नता भनेको तपाईंको वेबसाइटको डिजाइन र सामग्रीमा विसंगतता ल्याउने हो। तिनीहरू समान वेबसाइटको फरक पृष्ठहरू फरक देखिने बनाउँदछन्। यस प्रकारको सेटअप वा वेबसाइट डिजाइनले प्रयोगकर्ताहरूलाई दु: ख दिन्छ।
यदि वेबसाइटको ईन्टरफेस तत्वहरू देखा पर्दछ र लगातार कार्य गर्दछ भने, प्रयोगकर्ताहरू साइट प्रयोग गर्दा विश्वस्त र सहज महसुस गर्छन्। तिनीहरू कुनै पनी वेबसाइटको अन्वेषण गर्न सक्छन् प्रत्येक पृष्ठ को डिजाइन र सुविधाहरु को लागी परिचित हुन आवश्यकता महसुस बिना।
२. आफ्नै व्यवस्थापनको लागि डिजाईन
वेबमास्टर्स द्वारा अर्को साधारण गल्ती हो कि तिनीहरू शीर्ष-स्तर अधिकारीहरू खुसी बनाउन वेबसाइट डिजाइन गर्छन्। गृहपृष्ठले शीर्ष व्यवस्थापन, मिसन र दर्शन कथन, कर्पोरेट ईतिहास, र त्यस्ता अन्य चीजहरूका फोटोग्राफहरू समावेश गर्दछ।
यी सबै कुराहरुमा राम्रो लाग्छ
हाम्रोबारे पृष्ठ किनभने यो सहि तपाईंको कम्पनी, व्यवस्थापन, स्टाफ, दर्शन, मिशन, आदि परिचय स्थान हो। तपाईंले नोट गर्नुपर्नेछ कि तपाईंको वेबसाइटको उद्देश्य तपाईंको दर्शकहरूको सेवा गर्नु हो न कि तपाईंको उच्च अधिकारीहरूलाई खुशी पार्नु हो। लक्षित दर्शकहरू र ग्राहकहरू पहिले आउँछन् जब यो तपाईंको व्यवसायको उद्देश्यहरू पूरा गर्ने बारेमा हो।
The. उद्देश्य हराइरहेको छ
धेरै व्यवसाय मालिकहरू वेबसाइटको लागि जान्छन् किन कि कसैले तिनीहरूलाई त्यसो गर्न सुझाव दिन्छ। उनीहरूलाई कसरी थाहा पाउने र वेबसाइटमा के गर्ने भनेर थाहा छैन। केवल किनकि अरुले केहि गरिरहेका छन् वेबसाइटको विकास र नियन्त्रणको पछाडि कारण हुनु हुँदैन।
व्यवसायहरूले बुझ्नु पर्दछ कि वेबसाइटलाई व्यापार कार्डको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न वेब प्रयोग गर्न उत्तम तरिका होईन। कम्पनीहरूले धेरै अनलाइन उपस्थितिबाट फाइदा लिन सक्दछन्।
तपाईंको व्यवसायको वेबसाइट प्रबन्ध गर्ने क्रममा, तपाईंको दर्शकहरूलाई मूल्य दिने बारेमा सोच्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरूले तपाईंको साइट भ्रमणबाट फाइदा लिन सक्छन्। यदि यो कुरा भयो भने, तिनीहरूको रकमहरू स्वचालित रूपमा अनुसरण हुनेछन्।
The. मर्मत बजेटलाई वेवास्ता गर्दै
कहिलेकाँही, वेबसाइट मालिकहरूले उनीहरूको वेबसाइट निर्माण गर्दछन् (वा उनीहरूको वेबसाइट निर्माण गर्नुहोस्) र बिर्सनुहोस् कि यसलाई प्रत्येक बर्ष कायम गर्नु आवश्यक छ। एक वेबसाइटको डिजाइन, सामग्री, र तत्वहरू समय-समयमा जाँच/अपडेट हुनुपर्दछ।
वेबसाइट मर्मतका लागि पैसा चाहिन्छ। ब्यापार मालिकको रूपमा, निश्चित गर्नुहोस् कि पैसाको एक निश्चित रकम तपाईंको वेबसाइटको मर्मत बजेटको रूपमा राखिएको छ। यो आवश्यकता अनुसार फरक हुन्छ तर साधारणतया %०% - १००% हुन्छ तपाईंको साइट निर्माण गर्ने क्रममा प्रारम्भिक लागतको।
विभिन्न तत्वहरू, जस्तै टेम्पलेटहरू र शैली गाइडहरू, समयको साथ विकसित हुन आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्नुभएन भने, तपाईंको वेबसाइट अलग हुन सक्छ। तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको अगाडि रहन, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ जानुहुन्छ
उत्तम र सस्तो वेबसाइट मर्मत सेवाहरू। Your. तपाईको साइटलाई मोबाइल मैत्री बनाउँदैन
अनलाइन उपस्थितिको बारेमा सचेत हुनु र वेबसाइट बनाउनु वेबसाइट मालिकहरूले गर्नुपर्ने सबै कुरा होइन। यो लक्षित श्रोतालाई प्रभावकारी रूपमा पुग्न आवश्यक छ। र त्यसका लागि तपाईंले आफ्नो साइट मोबाईलमैत्री छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्दछ।
स्मार्टफोन र मोबाइल उपकरणको प्रयोग दिन बित्दै जाँदै छ। अध्ययनहरूले प्रकट गर्दछ कि व्यक्ति, औसत,
उनीहरूको स्मार्टफोनमा तीन घण्टा भन्दा बढी खर्च गर्नुहोस्। त्यस्ता तथ्या .्कहरूले सुझाव दिन्छ कि प्रत्येक व्यवसायले यसको वेबसाइटलाई मोबाइलमैत्री बनाउनु पर्छ। एक मोबाइल मैत्री वेबसाइट तपाइँको दृश्यता को प्रवर्धन, तपाइँ तपाइँको प्रतियोगीहरु भन्दा अगाडि राख्छ, र तपाइँको आगन्तुक को ब्राउजि of अनुभव बृद्धि गर्दछ। यदि तपाईंको साइट मोबाइल मैत्री छैन भने, निश्चित गर्नुहोस् कि यो पहिलो वेब व्यवस्थापन कार्य हो।
प्लगइनहरू वेबसाइटको अभिन्न हिस्सा हुन्, विशेष गरी वर्डप्रेस-प्रबन्धित साइटहरूका लागि। यदि कुनै वेबसाइटमा प्लगइनहरू छन् भने तिनीहरूलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न आवश्यक हुन्छ।
वेबसाइट मालिकहरूले यो बुझ्नुपर्दछ कि वर्डप्रेस प्लगइनहरू वेब अनुप्रयोगहरू/सफ्टवेयर हुन्, र सुरक्षा बढाउन, बगहरू ठीक गर्न, र वेबसाइटमा नवीनतम सुविधाहरू थप्नको लागि नियमित रूपमा अपडेट गर्नुपर्दछ।
वेब व्यवस्थापन सेवाहरू काममा लिनु अघि, वेब व्यवस्थापन योजनाहरू जाँच गर्न नबिर्सनुहोस्। यदि सेवा प्रदायकले नियमित रूपमा प्लगइनहरू अपडेट गर्न प्रस्ताव गर्दछ भने, यसको लागि जानुहोस्।
7. वेबको रणनीतिक महत्त्व बुझ्दैन
व्यवसायले गर्ने सब भन्दा ठूलो गल्ती भनेको वेब वर्ल्डको रणनीतिक महत्त्व बुझ्दैन। तिनीहरूका लागि वेबसाइट अनलाइन ब्रोशर बाहेक अरू केही पनि छैन।
ठिक छ, यस प्रकारको सोचाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ किनकि वेब र व्यापारको बृद्धि र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ - आज र भोलि। यो बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि अनलाइन उपस्थितिले व्यवसायहरूको लागि नयाँ अवसरहरू खोल्छ, जस्तै कम्पनीलाई सीमाना बाहिर आफ्नो उत्पादनहरू वा सेवाहरू बेच्न अनुमति दिँदै।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वेबसाइट को मर्मत प्रक्रिया नवीनतम तकनीक, रणनीति, र नेटवर्कि ideas विचारहरू प्रयोगमा केन्द्रित छ। त्यसो गर्नाले तपाइँको वेबसाइट छोटो र लामो अवधि मा फलदायी परिणाम दिनेछ।
Bac. ब्याक-अप वेबसाइटको डाटाबेस र फाइलहरू होईन
धेरै व्यक्तिहरूका लागि वेबसाइटको सुरक्षा भनेको मजबूत पासवर्ड प्रयोग गर्नु वा उत्तम होस्टिंग कम्पनीमध्ये एक छनौट गर्नु हो। तिनीहरू आवश्यक छन्, तर वेबसाइटको डाटाबेस र फाईलहरू जगेडा गर्नु पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण छ।
एउटा ब्याकअपले धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ जस्तै मानव त्रुटिहरू बिरूद्ध संरक्षण, डेटा नोक्सान रोक्न, मालवेयर संक्रमणहरू समाधान गर्ने, हैकर्सको बिरूद्ध संरक्षण, अद्यावधिक हुँदा आइरहेका मुद्दाहरूलाई उल्टाउने, र अझ बढि।
प्रत्येक वेबसाइट मालिकले नियमित रूपमा आफ्नो वेबसाइटको फाईलहरू र डाटाबेस जगेडा गर्नु पर्छ। त्यसो गर्दा सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ र कष्टप्रद परिस्थितिहरू विकसित हुँदै रोकिन्छ जबकि समस्या निवारण r हराएको डाटा रिकभरी गर्दा।
Imp। अनुचित वा कुनै लिंक भवन छैन
के प्रयोग गरीन्छ यदि केवल व्यवसाय/कम्पनीसँग नजिकबाट सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई थाहा छ कि वेबसाइटले उनीहरूको व्यवसायलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। इन्टरनेट को एक व्यवसाय को लागी सबै को लागी एक प्रभाव को लागी अनुमति दिन्छ।
यो उचित लि building्क भवनको साथ धेरै नै सम्भव छ। सान्दर्भिक वेबसाइटहरू र सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूको उपलब्धताका साथ, व्यवसायहरूले उच्च-स्तरको लिंकहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्। यो अभ्यासले व्यवसायलाई लोकप्रिय बनाउँदछ र सम्भावित ग्राहकहरूलाई वेबपृष्ठमा निर्देशन दिन्छ जहाँ उनीहरूले कार्य गर्नुपर्दछ।
जसको उद्देश्य सम्भावित ग्राहक/ग्राहकहरूको बढी संख्यालाई आकर्षित गर्न वा ब्लग वा वेबपृष्ठमा आगन्तुकहरूको संख्या बढाउने हो, उचित लिंक निर्माण आवश्यक छ।
अर्को साधारण वेब व्यवस्थापन गल्ती भनेको इन्ट्रानेट र इन्टरनेटको बिच भिन्नता बुझ्दैन। केही व्यवसायहरूले ईन्हाउस घोषणाहरू गर्न आफ्नो वेबसाइटहरू प्रयोग गर्दछन्, जुन गलत छ।
आन्तरिक/इन-हाउस घोषणाहरू कम्पनीका कर्मचारी र व्यवस्थापनका लागि हुन्, र तिनीहरूले इन्ट्रानेट मार्फत सर्कुलेट गर्नुपर्छ।
इन्टरनेट मा एक वेबसाइट लक्षित दर्शकहरु को लागी हो। यसको डिजाइन, तत्वहरू, र सामग्रीले यो भ्रमण गर्ने व्यक्तिको आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ। आगन्तुक/ग्राहक/सम्भावितहरू केन्द्र राख्नुपर्दा साइट राख्नुपर्दछ।
कसरी वेब व्यवस्थापन को गल्तीहरू बेवास्ता गर्ने?
वेबसाइट मर्मत सेवा प्रदायक। जब व्यक्तिहरूले वेब मर्मतसम्भार कार्यहरू नियन्त्रणमा लिन्छन्, तिनीहरू मध्ये अधिकांश वेबसाइटको प्रतिष्ठा कायम गर्न असफल हुन्छन्। यही कारणले विज्ञहरूले उद्योग नेताहरूबाट वेबसाइट मर्मतसम्भार सेवाहरूको रोजाई सुझाव दिन्छन्
किन वेबसाइट मर्मतका लागि Semalt?
Semalt ले वेबसाइटको सबै आवश्यक रखरखाव आवश्यकताहरूको ख्याल राख्छ।
यसले सबै प्रकारका वेबसाइटहरूको लागि वेब प्रबन्धन कार्यहरू प्रस्ताव गर्दछ, चाहे कस्टम वा वर्डप्रेस वा कुनै अन्य CMS मार्फत व्यवस्थित।
ग्राहकहरूको आवश्यकता र बजेटलाई ध्यानमा राख्दै, Semalt ले कस्टम वेब मर्मत योजनाहरू प्रदान गर्दछ।
Semalt मा सबै वेबसाइट मर्मत कार्यहरू उद्योग विशेषज्ञहरूको निरीक्षणमा गरिन्छ।
Semalt द्वारा वेब रखरखाव सेवा परिणाम द्वारा समर्थित छ। यस कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरुलाई २,500००,००० भन्दा बढी योग्य सीसा उत्पादन गर्न मद्दत गरेको छ केवल तिनीहरूको वेबसाइटको ख्याल गरेर।